10 Beautiful Indrindra Medieval Towns In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Beautiful Indrindra Medieval Towns In Eoropa
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 31/10/2020)
Eoropa Feno manan-karena tantara sy ny fahasamihafana. Raha ny tena izy, na aiza na aiza alehanao, ianao dia mety hahita ny sisa lasa sivilizasiona. Indraindray, ireo toerana ireo mponina rava. Etsy ankilany, ireo toerana dia afaka ny ho toerana izay efa maty ny fitsapana ny fotoana ka tafiditra any amin'ny tontolo maoderina. Save A Train mandray anao amin'ny fitsidihana ny 10 tsara tarehy indrindra tamin'ny moyen âge tanàna ao Eoropa. Miomàna hahita tanàna tsara tarehy fa mifangaro tantara sy ny fiainana miaraka amin'ny singa maoderina fa ny daty indray ny fe-potoana Moyen Âge.
1. Beautiful Indrindra Medieval Town In Eoropa – Delft, The Netherlands
Raha toa ianao ka mitady ny tanàna izay mahafaoka ny moyen âge mahatsapa ao amin'ny tontolo maoderina, mijery intsony noho ny Delft. Delft Mety ampanenoy ny lakolosy ny olona tia zavakanto satria mifandray akaiky amin'ny Zavatra mpanao hosodoko Vermeer. Raha ny tena izy, ve ianao, raha hitsidika ny tanàna, dia hahatsapa ho toy ny raha toa ianao ka ao ny fanaovana sary hosodoko mihitsy. Mbola afaka mahatsapa ny toetra fototry ny sary hoso-doko raha mandeha mamakivaky ny tanàna. Raha mikasika ny moyen âge ny trano, misy Renaissance fomba lapan'ny tanàna sy ny moyen âge ny fiangonana amin'ny mahavariana nitehina tilikambo. Ankoatra ny lehibe tamin'ny moyen âge trano izany dia mampitolagaga anao, Delft koa tsy tambo isaina lakandrano fa handeha hamaky ny tanàna, ary manao ny ambiance tsy manam-paharoa.
Hallstatt mety ho toa mahazatra ny olona izay manaraka tsara tarehy mpizaha tany toerana tao amin'ny Instagram. Maro ireo manaitra ny sary avy any amin'ny faritra, ary indray mandeha mitsidika ny tanàna, ho fantatrareo ny antony. Naka ny sary ratsy dia mitaky be dia be ny ezaka noho ny mahafinaritra drano ny tanàna, izay no iray mahatalanjona ny fahitana. koa, ny fijery manontolo ary nahatsapa ny tanàna dia hamela anareo ho talanjona. Toerana iray manontolo dia santionan'izany fiangaly hahatsapa izany, ary ny tena mahavariana fa izany dia hita fa iray Izao tontolo izao UNESCO lova toerana. Hiaina ny moyen âge mahatsapa ny Hallstatt eo amin'ny manaraka diany an'i Austria.
3. Beautiful Indrindra Medieval Town In Eoropa – Echternach, Luxembourg
tenafrnach ny tanàna tranainy indrindra ao Luxemburg, ary izany dia miorina manodidina amin'ny rindrin'ny Echternach Abbey. Izany dia an-trano be dia be antitra sy ny toerana manan-tantara mahavariana, toy ny Fiangonana Masindahy Piera sy Paoly, ny Basilica Saint Willibrord, ny Gothic nahaleo an-tsena, ary ny Romana villa fa vita indray ny fotoan ' ny fanjakana romanina. Mandeha an-tongotra namakivaky ireo arabe Echternach dia mahatsapa ho toy ny ianao ao moyen âge in. Na izany aza, izany dia tsy maintsy rehetra amin'ny fampiononana ao amin'ny tontolo maoderina, ary tsy amin'ny vanim-potoana maizina.
4. Carcassonne, Frantsa
Carcassonne dia ny moyen âge ny tanàna dia mimanda intsony amin'ny sisa amin'ny tontolo izao. Ny rindrina sy ny tilikambo daty hiverina any amin'ny taonjato faha-13, ary tena manome ny tanàna ny fijery sy mahatsiaro ny fahiny-tanàna. Amin'izao fotoana izao, Carcassonne dia UNESCO ho Lovan'izao Tontolo izao izay manome anao ny fahatsapana efa nandeha tany ambadika tany ny fotoana. Zavatra tsy hilaza izao rivo-piainana sy ny ody maro mitaona amin'ny mpizaha tany izay te-hiaina rivo-piainana izao rehetra izao taloha.
Narbonne ho Carcassonne
Toulouse ho Carcassonne
Montpellier ho Carcassonne
Nimes ho Carcassonne
5. Beautiful Indrindra Medieval Town In Eoropa – Heidelberg, Alemaina
Heidelberg miorina amin'ny toerana tena tobin faritra. Raha ny tena izy, ny faritra efa an-trano ny olona nandritra ny taona maro. Ny akaiky ny renirano tsara Neckar sy ny toetrandro no nanao ny tany an-trano tsara. Nandritra ny taona maro, Heidelberg efa foibe ho an'ny olona. Raha ny tena izy, izany no hita ao amin'ny ambiance sy ny maritrano ao an-tanàna. Iray tsara tarehy santionan'izany fiangaly afovoan-tanàna sy ny tsy mampino ny lapa dia roa fotsiny ny zavatra izay hasehoko anao ny harena sy ny habetsahan ' ny faritra dia nirehareha mandritra ny fotoana. Hieldberg tsy lasibatra nandritra ny ady lehibe faharoa, izay midika fa mbola mitondra be dia be ny tantara. Raiso ny fandehandehanana amin'ny alalan'ny mahagaga io toerana ka jereo ny zava-drehetra izany dia manolotra.
6. Bern, Soisa
Rehefa tonga ny fahagola tanàna any amin'ny Eoropa Afovoany, Bern any Soisa dia tsy maintsy fitsidihana. Maha-te ho tia, tanàna taloha no iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra tao Eoropa. Izany no feno arcades izay daty indray ny moyen âge, ary ny loharano fa ny fanaratsiana isan-karazany kanto olo-malaza. Raha ny tena izy, rehefa tonga ny zava-kanto, Bern dia iray amin'ireo lehibe indrindra ny fanangonana ny kanto avy any amin'ny mpanakanto Paoly Klee. Ankoatra ny architectural hatsaran-tarehy sy manan-tantara ireo tranobe ao an-tanàna, misy ihany koa ny mahafinaritra ny renirano mandalo izany. Ny renirano Aare mandeha ny alalan ' ny tanàna sy ny mahatonga izany tena tsara tarehy. Mark Bern dia toerana hijerena amin'ny dia manaraka anao any Suisse.
Zurich To Bern Lamasinina
Geneva To Bern Lamasinina
Interlaken To Bern Lamasinina
7. Beautiful Indrindra Medieval Town In Eoropa – San Gimignano, Italia
San Gimignano dia boky hill tanàna avy Tuscany. Izany dia misarika ny amin'ny mpitsidika an'arivony ny moyen âge italiana mijery. Ny tena mahasarika ho amin'ny San Gimignano dia ny faravodilanitra ny mahatalanjona tilikambo izay daty hiverina any amin'ny taonjato faha-14. Rehefa ny faritra lavo eo ambanin'ny fitsipi-Florence, rehetra fa ny efatra ambin 'ny folo ao amin' ny fitopololahy roa tilikambo no rava. Androany an-tanàna dia ny UNESCO Lova iraisam-pirenena site, ary izany dia tsy maintsy mahita ho an'izay manana liana tamin'ny Italia manan-karena sy ny tantara mahavariana.
8. efa nampiasaina, Belzika
Maro hilazana efa nampiasaina toy ny Venise ny Avaratra. Dia feno ny lakandrano, cobbled lalana, ary tsara tarehy efamira izay voahodidina fiakaran'ny tilikambo sy ny trano fiangonana. Ireo no marina ny sasany amin'ireo nahasarika fa hitondra olona an ' arivony ny mpizaha tany mba mahafinaritra ity tanàna. Mandeha amin'ny alalan'ny Bruges dia handao anao amin'ny talanjona amin'ny fifangaroan'ny toetra sy an'ireo trano fahagagana. Misy ny tsy fahampian'ny ny moyen âge ny trano ao amin'ny tanàna, ary afaka ho azo antoka fa ny fitsidihana ity tanàna ity dia handao anao gaga ny hatsaran-tarehy sy ny fandriampahalemana ny faritra mamirapiratra.
9. Beautiful Indrindra Medieval Town In Eoropa – Lillafured, Hongria
Lillafured dia tonga lafatra ny fitambaran'ny toetra sy ny moyen âge ny maritrano. Miorina akaikin'ny Farihy Hamori any Hongria, dia tsy maintsy fitsidihana toerana. Ary tamin'ny voalohany naorina ho toy ny fialan-tsasatra amin'ny Count Andras Bethlen. Na izany aza, rehefa mandeha ny fotoana, dia nanjary tanàna iray sy trano fandraisam-bahiny tsara tarehy. Ny lapa tsara be dia be voahodidin'ny riandrano iray, voajanahary zohy, tongotra lavitra lalana, ary na dia mihantona zaridaina. Araka ny hitanao izao, Lilafured no toerana tonga lafatra for natiora tia.
Raha mandeha amin'ny masoandro sy ny tsara tarehy Tuscan rolling hills, mety ho tonga amin ' ny moyen âge ny tanàna tao an-tendrombohitra – Montepulciano. Fa manana ny zavatra rehetra azonao atao avy italiana iray an-tanàna. Ny tena nahasarika ahitana zavatra toy ny mahavariana divay, lapa fahiny rindrina, sakafo matsiro, ary na dia mafana ny loharano. Izany no tena mahafatifaty toerana fa ianao dia tsarovy mandrakizay. Ataovy azo antoka ny mijanona raha toa ianareo efa sendra mandeha amin'ny alalan'ny Italia.
Siena ny Montepulciano Lamasinina
Grosseto ny Montepulciano Lamasinina
Florence ho Montepulciano Lamasinina
Roma ho Montepulciano Lamasinina
Rehefa tonga amin'ny tanàna sy tanàn-dehibe fahiny, Eoropa dia feno azy. Maka ny fotoana mba hitsidika ireo coves ny kolontsaina sy ny tantara dia hampivoatra ny fomba fijeriny momba izay ny olona dia mahavita. Boky Fiaran-Dalamby ara-potoana ary mitsidika ny firenena fa ny ankamaroan'ny Tsoahy ny liana.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Beautiful Indrindra Medieval Towns In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-medieval-towns-europe/ – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#beautifultowns #traveleurope tamin'ny Moyen Âge medievaltown fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel